जंगली आगोले धुवाँले कुकुरको स्वास्थ्यलाई कसरी असर गर्छ? - राम्रो एयर टीम द्वारा K9 मास्क
घर > वायु प्रदूषण कुकुर ब्लग > जंगली आगोले धुवाँले कुकुरको स्वास्थ्यलाई कसरी असर गर्छ?
06 सक्छ, 2021 २०२१ क्यालिफोर्निया वाइल्डफायर सीजन अत्यन्त चरम र खतरनाक देखिन्छ
अप्रिल 20, 2021 क्यालिफोर्निया किन चरम २०२० वन्य आगोको मौसम अपेक्षा गर्दैछ?
क्यालिफोर्निया वन्य आगो
जंगली आगोले धुवाँले कुकुरको स्वास्थ्यलाई कसरी असर गर्छ?
सेप्टेम्बर 23, 2020
यो वर्ष पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका मा वन्य अग्नि पहिले नै विशाल र आश्चर्यजनक साबित भएको छ। क्यालिफोर्निया, ओरेगन, कोलोराडो र वाशिंगटनभरि जलेको जंगली आगोले काख, खरानी र धुवाँले हावा भरिरहेको छ।
खरानी कणको बाक्लो बादलले शहर र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बगिरहेका छ बे क्षेत्रहरूको आकाश सुन्तलामा परिवर्तन गर्दै? सानो कणहरू जसले धुवाँ समावेश गर्दछ रेड र सुन्तलाको लामो प्रकाश तरंगदैर्ध्य छरितो पार्छ निलो, छोटो तरंग दैलो को पार गर्न सूर्यलाई मधुरो पार्छ र मध्यदिनको गोधूलि सिर्जना गर्दछ।
तर डरलाग्दो चमक बाहेक, धुवाँ ज्वलन्त आगोबाट सयौं किलोमिटर टाढा भएका मानिस र कुकुरलाई स्वास्थ्यको सबैभन्दा ठूलो खतरा हुन सक्छ।
"एउटा कुरा जुन हामीले यस मौसममा विशेष गरी हेरेका थियौं ... केवल भौगोलिक मापदण्ड भनेको जfire्गली आगोको धुवाँ हो, किनकि त्यहाँ धेरै ठूलो आगो लाग्छ," क्यालिफोर्निया एयर रिसोर्स बोर्डका प्रवक्ता एमी म्याकफर्सनले भने।
फोहोर हावाले श्वासप्रश्वासको संक्रमणसँग सम्बन्धित लक्षणहरूलाई पनि बिगार्न सक्छ। र आउने दिन र हप्ताहरूमा, चलिरहेको आगो रिज गर्न जारी रहन सक्छ, नयाँहरू क्रपसँग।
आगोको लागि धुवाँको दृष्टि हराउन सजिलो छ, विशेष गरी जब एकै समयमा यति धेरै विशाल आगोहरू बलेको छ। यद्यपि आगोबाट बिलि pl प्लीम्स मुटु र फोक्साहरूको लागि ठूलो खतरा हुन सक्छ।
धुवाँ आफै ग्यास र कणहरूको मिश्रण हो जस्तै अस्थिर कार्बनिक यौगिकहरू, कार्बन मोनोअक्साइड, कालि, र खरानी। तुरून्त, तिनीहरू पानी आँखा र खरोंच गलेको कारण हुन सक्छ। तर धुवाँबाट सबैभन्दा ठूलो खतरनाक केहि सानो कणहरूबाट आएको हुन्छ, विशेष गरी ती दुई व्यास २. mic माइक्रोन भन्दा सानो हुन्छ, जसलाई पीएम २. as भनिन्छ। यी कणहरू श्वासमार्गमा गहिरो रूपमा प्रवेश गर्न सक्दछन्, मुटु र फोक्साहरूको समस्या बढाउँदै।
मुटु र फोक्सोको स्थिति भएका मानिस र घरपालुवा जनावरहरूलाई धूम्रपान नहुने अवस्थाहरूमा थप जोखिमका बारे सचेत हुनुपर्दछ किनकि ज wild्गल आगोको धुवाँले हृदयघात र स्ट्रोक जस्ता गम्भीर हृदय र सेरेब्रोवास्कुलर अवस्थाहरूको सम्भावित जोखिम बढाउन सक्छ।
यस प्रकारको राम्रो कणहरूमा निरन्तर एक्स्पोजर घातक हुन सक्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ट्रक, कारखाना र धूलोबाट आउने सूक्ष्म कण प्रदूषणले विश्वभरि प्रति वर्ष million० लाखको ज्यान लिन्छ। अन्य स्रोतहरूको प्रदूषणको तुलनामा जंगली आगोको धुवाँले एउटा अनौंठो खतरा निम्त्याउँछ। क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय लस एन्जलसको वायुमंडलीय र समुद्री विज्ञान विभागका अध्यक्ष सुज्यान पाल्सनले उल्लेख गरे कि त्यहाँ उब्जिएको अनुसन्धानले संकेत गर्यो कि सामान्य शहरी प्रदूषण भन्दा पनि विषालु आगोको धुवाँ विषाक्त हुन सक्छ।
"जंगल आगोको धुवाँ कणहरु को बारे मा वास्तव मा फरक छ कि तिनीहरूले जलाइएको [वा] आंशिक रूपमा जलेको बोट बिरुवाहरु को एक गुच्छा छ कि छ," उनले भने। "सामान्य शहरी प्रदूषण सूपमा, यो तुलनात्मक रूपमा सानो भाग हो, जबकि जfire्गल आगोको धुवाँमा यो एकदम प्रभावशाली हुन्छ।"
त्यो जलेको जैविक वनस्पति सामग्रीले अन्य तत्वहरू वा वनस्पतिहरू आफैले धातु तत्त्वहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ र शरीरमा ती धातुहरूको विषाक्तता बढाउन सक्छ। यसले अधिक सूजन निम्त्याउँछ वा न्यूरोलजिकल समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
ज wild्गल आगोको धुवाँमा हावा प्रदूषकको जोखिममा रहेका कुकुरहरूले फोक्सोलाई चिडचिड गर्न सक्छ, सूजन निम्त्याउन सक्छ, प्रतिरक्षाको कार्य बदल्न सक्छ र श्वासप्रश्वासको संक्रमणको सम्भावना बढाउन सक्छ।
वेस्ट कोस्टका केही भागहरूमा परिदृश्य र जलवायु सुविधाहरू पनि छन् जुन पीएम २..2.5 जस्ता प्रदूषकहरूको जोखिम बढाउँछ। "हामी शहर मा प्रदूषण जालमा लागि वास्तवमै आश्चर्यजनक भूगोल छ," पॉलसन भने। लस एन्जलस वरपरका पहाडहरूले बेसिनको रूपमा काम गर्न सक्दछन्, जबकि शहरको समुद्र र मरुभूमि बीचको स्थानले धेरै वायुमंडलीय कन्फिगरेसनहरू सिर्जना गर्दछ जसले एन्जेलेनोसमा फोहोर हावा निम्त्याउँदछ।
चलिरहेको अग्नि मौसमको वायु गुणलाई यत्तिको खतरनाक बनाउने अर्को कारक चलिरहेको जंगलको आगोको विशाल परिमाण हो। धुवाँको मात्राको साथ यी ब्ल्याजेहरू स्पि। गर्दै छन्, यसबाट जोगिन असम्भव हुन्छ, घर भित्र पनि।
"आउटडोर प्रदूषण सँधै भित्र आउँछ," रोनाल्ड कोहेनले भने, युसी बर्कलेमा वायुमंडलीय रसायन विज्ञानका प्राध्यापक। "यसले कति गर्छ यसले घरहरूको स्थानीय निर्माणमा निर्भर गर्दछ।"
स्यान फ्रान्सिस्को खाडी क्षेत्र जस्ता वर्ष भरको मध्यम मौसमको साथ पश्चिम तटका केही भागहरूमा, भवनहरू सँधै बाहिर हावा भित्र राख्न वा भित्र राख्न सकिदैन। लस एन्जलस क्षेत्रमा, प्रत्येक मध्ये प्रत्येकमा एक घर वातानुकूलन छैन। खाडी क्षेत्रमा, करिब दुई तिहाइ घरहरू चिसो बिना नै छन्।
पश्चिम तटीय मा भर्खरको रेकर्ड ब्रेक संग, उच्च वायुमण्डलीय दबाव मा स्थिर वायु शहरी क्षेत्रहरु मा वन्य आगोबाट प्रदूषण पासो छ।
क्यालिफोर्नियाको जनस्वास्थ्य विभागले उच्च वायु प्रदूषणको अवधिमा घर भित्रै रहन र एयर फिल्टर्सको साथ एयर कन्डिशनर चलाउने र उच्च क्षमताको पार्टिकुलेट एयर (HEPA) फिल्टर भएको कोठाको एयर क्लीनर जस्ता कार्यनीतिहरू प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छ।
तर पर्याप्त चिसो नभएको व्यक्ति भित्र भित्र बन्द र धुँवामा विन्डो खोल्ने बीच छनौट गर्न बाध्य भएका छन्।
यी तत्वहरूले मिलेर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिकाको विशाल हूलमा तात्कालिक स्वास्थ्य संकट निम्त्याउँदैछ।
ओरेगनमा, मेडफोर्ड शहरका सबै ,82,000२,००० बासिन्दाहरूलाई अल्मेडा फायर अतिक्रमण गर्दा मंगलबार साँझ खाली गरियो।
क्यालिफोर्निया पनि कडा चोट पुगेको छ। भालु फायर, जुन उत्तर कम्प्लेक्स फायरको अंश हो, मंगलबार बिहान प्रज्वलित भयो २ 250,000 घण्टामा २ 24०,००० भन्दा बढी एकडमा फैलनु अघि। यो राज्यमा जम्मा दुई दर्जन भन्दा बढी प्रमुख ज wild्गल आगोको एउटा हो जुन पहिले नै अत्यन्त चरम र असामान्य आगोको मौसम हो।
क्यालिफोर्नियाको वन तथा अग्नि सुरक्षा विभाग (क्याल फायर )का अनुसार राज्यभरि वन्य आगोले यस वर्ष सबै क्षेत्रहरुमा २.२ करोड एकड भन्दा बढी जलेको छ, एक रेकर्ड रकम, र अझै वर्षमा चार महिना बाँकी छ। निरन्तर आगलागीले कम्तिमा आठ व्यक्तिको ज्यान लिएको छ र 2.2 3,300,०० भन्दा बढी संरचनाहरू नष्ट गरेको छ।
"वन्यजन्तुहरू जहिले पनि पश्चिममा परिदृश्यको एक हिस्सा भएको छ, तर तिनीहरू यति नराम्रो हुँदै गइरहेका छन्," पलसनले भने।
वन्य आगोलाई खतरनाक बनाउने धेरै मुख्य कारकहरू छन्, ती सबै प्रायः सबै मानिसद्वारा चालित छन्। व्यक्तिहरू आगोको लागि अधिक जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा निर्माण गरिरहेका छन्। यसले वनको आगो र यसको ठूलो क्षतिलाई प्रज्वलित गर्ने जोखिम बढाउँछ। अगस्टमा क्यालिफोर्नियामा प्रज्वलित धेरै ब्लेज बिजुलीको प्रहारबाट सुरु भएको थियो भने, वन्य आगोको अधिकांश भाग मानिसहरूद्वारा नै गरिन्छ, चाहे शिविरमा बलेको आगोबाट, असुरक्षित संरक्षित बिजुली लाइनहरू वा आगलागीबाट।
मानिसहरूले यस क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपले हुने ज wild्गल आगोको दमन पनि गरेका छन्, यसले बोटबिरुवा स and्कलन गर्न र पछि सुख्खा र चरम तापको अवधिमा सुख्खा हुने अनुमति दिए। त्यसले आगोमा पर्ने इन्धनको रूपमा छोड्छ यदि आगोले तिनीहरूको प्राकृतिक मार्ग जलाउने थियो, वा यदि थप निर्धारित जलाइएको थियो भने।
जीवाश्म ईन्धनहरू बाट वातावरणमा उष्णता जालमा पार्ने ग्यासहरूको वृद्धिले ग्रहलाई न्यानो बनाइरहेको छ। यसले पश्चिमका केही जsts्गलहरू सुक्खा बनाउँदैछ, यसले बार्क बिटुलजस्ता कीराहरूबाट कमजोर बनाउँछ र तिनीहरूलाई सजिलै जलाउन दिन्छ। मौसम परिवर्तनले अत्यधिक तातो कालको सम्भावना पनि बढाउँदैछ जुन विशाल वन्य आगोका लागि आदर्श ईन्धन प्रदान गर्दछ।
यही कारणले कि क्रिमसन स्काइज र धुवाँको हावा पश्चिममा धेरैको लागि जीवनको एक डरलाग्दो नियमित हिस्सा भएको छ। क्यालिफोर्निया एयर रिसोर्स बोर्डाको म्याफफर्सनले भने, "हामी आफैंलाई आगोको मौसममा भेट्न सक्छौं जहाँ धेरै दिनको कण पदार्थको उच्च सांद्रताबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको संख्या विगत केही वर्षहरूको लागि साँच्चिकै अनौंठो छ," क्यालिफोर्निया एयर रिसोर्स बोर्डका म्याफेरसनले भने। "हामी लाखौं मानिसमा कुरा गर्दैछौं।"
हामी शरद् intoतुमा जाँदा, क्यालिफोर्नियाको कडा मौसमी हावा पनि माथि उठ्नको लागि तयार छ। उत्तरमा डियाब्लो वायु र दक्षिणमा सान्ता आना बतासको वेगले ust० माइल प्रतिघण्टा उकास्न सक्दछ, सुक्खा बोटबिरुवाको फराकिलो भागमा छिटो आगो र अmbers्ग फैलिरहेको छ।
ईन्धन, तातो हावा, र कम आर्द्रताको संयोजनले एरिजोना, वाशिंगटन, ओरेगन, क्यालिफोर्निया र नेभाडाभरि रहेका २ million करोड मानिसहरूका लागि रातो झण्डा चेतावनी दिएको छ। क्यालिफोर्नियामा, आउँदो दिनहरूले "कडा, उच्छ्वा हावा र कम आर्द्रता, वर्तमान आगलागी बढ्ने गतिविधि र नयाँ आगो द्रुत गतिमा बढ्न दिन सक्छ," क्याल फायरका अनुसार।